Imvuthuluka yeeNgulube efriziwe ebilisiweyo efektri kunye nabenzi | Huikang
Ukwaziswa kwemveliso Izinto zokwenza imveliso zivela kwiindawo zokuxhela kunye nakumashishini obhaliso lwangaphandle e-China. Ukungenisa izinto ezingasetyenziswanga ikakhulu zivela eFrance, Spain, nase-Netherlands
imigaqo Slice kunye nedayisi, nxiba umtya
Indlela ebandayo yokuQinisa
Ifilimu ejijelwe ngumkhenkce indlela, indlela ye-CPF inezibonelelo ezininzi: ifilimu eyenziweyo xa ukutya kungumkhenkce kungathintela ukwanda kunye nokuvela kokutya; ukunciphisa umda kwinqanaba lokupholisa, iikristali zomkhenkce ezenziwe kakuhle, kwaye azizukuvelisa ziikristale ezinkulu zomkhenkce; Ukuthintela ukonakala kweseli, imveliso inokunyibilika ngokwendalo; Ukutya ukutya kunencasa ngaphandle kokuguga.
Itekhnoloji yokuqandisa ye-Ultrasonic
Ifilimu esongelwe indlela yokubanda, i-UFT isebenzisa amaza e-ultrasonic ukuphucula inkqubo yokuqandisa ukutya. Uncedo kukuba i-ultrasound inokuphucula ukuhanjiswa kobushushu ngexesha lokuqandisela, ikhuthaze ukucocwa komkhenkce ngexesha lokutya okubandayo, kwaye iphucule umgangatho wokutya okubandayo. Iziphumo ezahlukeneyo ezibangelwa yi-ultrasound zingenza umda womda ube mncinci, wandise indawo yoqhakamshelwano, kwaye wenze buthathaka uxinzelelo lokudlulisa ubushushu, oluluncedo ekunyuseni izinga lokudlulisa ubushushu. Uphando malunga nokuqiniswa kwenkqubo yokudlulisa ubushushu lubonisa ukuba i-ultrasound inokukhuthaza i-nucleation kunye nokuthintela ukukhula kwe-crystallization ye-Crystal.
Technology koxinzelelo oluphezulu
Ingcinezelo High Ingcinezelo. I-HPF isebenzisa utshintsho olunoxinzelelo kulawulo lokutshintsha kwesigaba samanzi kukutya. Phantsi kweemeko zoxinzelelo oluphezulu (200 ~ 400MPa), ukutya kupholile kubushushu obuthile. Ngeli xesha, amanzi awabandi, emva koko uxinzelelo luyakhululwa, kwaye iikristale zomkhenkce ezincinci nezingafaniyo ziyenziwa ngaphakathi ekutyeni, kwaye umthamo weekristali zomkhenkce awuyi kwanda, onokuthi unciphise umonakalo wangaphakathi ekutyeni izihlunu kwaye ufumane ukutya okubandayo okunokugcina umgangatho wokutya wokuqala.
Egqithileyo Iinkuni zeNgulube ezibilisiweyo
Okulandelayo: Ulwimi lweNkomo olubilisiweyo